Ny teny Antartika dia entina ilazana ny tendrotany atsimo sy ny manodidona azy.
Io anarana io koa dia anarana entin'ny kaontinanta misy an'ny tendrontany atsimo. Ny hitarintsika eto amin'ity lahatsoratra ity dia ilay tondro jeografika sy ny zava-drehetra mikasikan'ny Antarktika, hatrany amin'ny fiheverana ny fisiany (tamin'ny Andro Taloha) hatramin'izao fotoana izao.
Ny Antartika dia kaontinanta iray any atsimon'ny Tany manana velarantany 14 tapitrisa kilometatra efa-mira. Ny habeny dia mbola kely nohon'ny Azia, ny Afrika na ny Amerika ; ny Eoropa sy ny Oseania ihany no kely noho izy. 98 isan-jaton'ny velarantaniny dia ranomandry manana hatevina 1 600 metatra, izay no tsy hahafantarana ny endriky ny ambanitaniny, fantatra fotsiny ankehitriny fa misy tohim-bohitra (chaine de montagne) sy farihy ambanin-dranomandry ohatra ny farihy Gamburtsev.
Ny antarktika dia ilay kaontinanta mangatsiaka, maina ary be rivotra indrindra eto an-tany ; maina satria latsaky ny roanjato milimetatra ny latsak'orana eo amin'ny amorontsiraka (ary mbola latsak'izany ny latsak'orana any amin'ny faritra anaty).
Tsy manana mponina tera-tany ny Antartika ary ny mipetraka any amin'izao fotoana izao dia siantifika ny ankamaroany. Voninkazo mahazaka ny hatsiaka, ny aizaina ary ny hamaina ihany no miaina any miaraka amin'ny karazam-borona, trondro sy biby mampinono ihany no any.
Ny teny Antartika dia avy amin'ny fiteny grika ἀνταρκτικός (antartikós), midika "mitohina amin'i Arktika". Tamin'ny 1820 ilay kaontinanta no hita voalohany ary ny tafoky rosy entin'i Mikhaïl Lazarev sy i Fabian Gottlieb von Bellingshausen no nahita azy. Fa tsy dia nahaliana olona firy ilay kaontinanta noho ny tsi-fisian'ny harena an-kibon'ny tany, ny tontolo tsy afaka iainana ary ny fitokanana jeografikany.
Araka ny fifanekena momban'i Antartika nosoniavin'ny firenena roa ambin'ny folo tamin'ny 1959 ary narahan'i fifaneken'i Madrid tamin'ny 1991, manana sata manokana ny Antartika : tsy azo anaovana hetsika militera any, ary tsy azo alaina ny harena ankibon'ny tany raha tsy karoka siantifika no tanjony.